Izibalo Zamuva Zethrafikhi Yesikhumulo Sezindiza saseFraport ngoSepthemba 2021: Positive!
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airport » Izibalo Zamuva Zethrafikhi Yesikhumulo Sezindiza saseFraport ngoSepthemba 2021: Positive!
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha • Izindaba • Ukukhishwa kwezindaba • Ukwakha kabusha • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
Isikhumulo sezindiza iFrankfurt Airport (FRA) samukele abagibeli ababalelwa ezigidini eziyi-3.1 ngoSepthemba 2021 - okumele ukukhushulwa ngamaphesenti ayi-169.1 unyaka nonyaka, yize kuqhathaniswa no-Septhemba 2020 obuthaka kakhulu.
Ukukhula kwabagibeli kuqhubekile nokuqhutshwa kakhulu ukugcwala kwamaholide. Ngenyanga yokubika, izinombolo zabagibeli be-FRA - ngenkathi zisathumela ukwehla kwamaphesenti angama-54.0 uma kuqhathaniswa noSepthemba 2019 - ziphinde zafinyelela cishe engxenyeni yezinga langaphambi kobhadane, ngaleyo ndlela kwaqhubeka ukuthambekela okuhle okwabekwa ngo-Agasti 2021.
Ezinyangeni eziyisishiyagalolunye zokuqala zika-2021, i-FRA isebenzise inani labagibeli abayizigidi eziyi-15.8. Lokhu kuholele ekwehleni ngamaphesenti angu-2.2 uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule, kuqhathaniswa nesilayidi esingamaphesenti angama-70.8 uma kuqhathaniswa nezinyanga eziyisishiyagalolunye zokuqala zika-2019.
ICargo throughput (airfreight + airmail) iqhubeke nokukhula kwayo ngamandla ngoSepthemba 2021, ikhuphuka ngokusobala ngamaphesenti ayi-13.4 unyaka nonyaka kuya kumathani emitha ayi-188,177.
Uma kuqhathaniswa noSepthemba 2019, amathani wezimpahla athole amaphesenti angu-7.7 ngenyanga yokubika. Ukunyakaza kwezindiza kukhuphuke ngamaphesenti angama-66.1 unyaka nonyaka kuya kuma-28,135 ukusuka nokuhlala phansi. Isisindo sokuqongelela esisuselwe phezulu (MTOW) sikhuphuke ngamaphesenti angama-61.5 safinyelela kumathani ayizigidi eziyi-1.8.
NgoSepthemba 2021, izikhumulo zezindiza ezikumaphothifoliyo omhlaba wonke eFraport zaqhubeka nokubika ukusebenza kahle kwezimoto. Ngaphandle kwesikhumulo sezindiza iXi'an (XIY) eChina, izikhumulo zezindiza zeQembu leFraport emhlabeni wonke zathola ukukhula okukhulu. Kwezinye izikhumulo zezindiza zeGroup, ithrafikhi yabagibeli inyuke ngaphezulu kwamaphesenti ayi-100 unyaka nonyaka - yize iqhathaniswa namazinga omgwaqo anciphise kakhulu ngoSepthemba 2020. Uma kuqhathaniswa nobandlululo lwangoSepthemba 2019, iningi lezikhumulo zezindiza iGraport's Group emhlabeni wonke zisabhalise amanani abagibeli abaphansi. Kodwa-ke, ezinye izikhumulo zezindiza zeGroup ezikhonza izindawo ezivakashelwa kakhulu ezifuna izivakashi - njengezikhumulo zezindiza zaseGrisi noma iAntalya Airport eTurkey Riviera - zibone ukuphindaphindeka kwezimoto cishe kumaphesenti angama-80 wamazinga wangaphambi kwenhlekelele ngenyanga yokubika (uma kuqhathaniswa noSepthemba 2019).
Isikhumulo sezindiza iLjubljana (LJU) enhlokodolobha yaseSlovenia samukele abagibeli abangama-65,133 ngoSepthemba 2021. Ezikhumulweni zezindiza zaseBrazil iFortaleza (FOR) nePorto Alegre (POA), izimoto ezihlanganisiwe zanda zaba ngabagibeli abayi-820,169. Isikhumulo sezindiza sasePeru iLima Airport (LIM) sathola abagibeli abacishe babe yizigidi eziyi-1.1 ngenyanga yokubika.
Inani lamathrafikhi ezikhumulo zezindiza ezingama-14 zaseGrisi lenyukele kubagibeli ababalelwa ezigidini ezi-3.4 ngoSepthemba 2021. Ogwini lwaseBulgaria Black Sea, izikhumulo zezindiza iTwin Star zaseBurgas (BOJ) naseVarna (VAR) nazo zibike ukuminyana kwezimoto okuphelele kunabagibeli abangama-328,990 . Isikhumulo sezindiza i-Antalya (AYT) eTurkey samukele abagibeli ababalelwa ezigidini ezi-3.8. Isikhumulo sezindiza i-St. Petersburg's Pulkovo Airport (i-LED) eRussia sasinabagibeli abalinganiselwa ku-1.9 million. Isikhumulo sezindiza iXi'an (XIY) eChina siqophe abagibeli abangaphansi nje kwezigidi eziyi-2.3 ngenyanga yokubika.
Landa i-Traffic Data (PDF)
Iningi lamaBrits belingeke libahloniphe Amabhizinisi Angagonyiwe
Uhlelo Lokuphatha lwe-COVID-19 olusungulwe uNdunankulu ...
I-Alaska Airlines iletha izindiza eziyi-12 ezintsha zeBoeing 737-9
Ezokuvakasha Zijwayele Ukuklama Ubuso Bamandla Azo
I-Russia iqala kabusha izindiza zayoya eFrance naseCzech Republic
I-Express Train esuka eMunich iye ePrague yaphahlazeka ngokubulala ...
Ukundizela eZambia noma eZimbabwe kuvele kwashesha kakhulu ...
Isihambeli Sezindiza SaseHawaii Esikhishwe Ngemuva Kokuba ...
I-Boeing 737 MAX Corporate Whitewash entsha: iBoeing ...
ISeychelles iya kudijithali esigabeni semidiya sase-Italy ...
IKiribati izophonsela inselelo umbono wakho ngempilo: Ukuvula kabusha ...